[YEPAMUTEMO] dr.fone - Selective iOS Data negadziriro yeparutivi & Dzosa
dr.fone Toolkit - iOS Data negadziriro yeparutivi & Dzosa
Negadziriro yeparutivi & Dzosai iOS Data Havasisina Zvichienderana
Imwe watinya kuti negadziriro yeparutivi ari iOS rose mudziyo kuti kombiyuta yako.
Bvumira kufanoziva uye kudzorera chero chinhu kubva negadziriro yeparutivi kuti mudziyo.
Export zvaunoda kubva negadziriro yeparutivi kuti kombiyuta yako.
No date sokurasikirwa namano panguva rokudzorera.
dr.fone Toolkit - iOS Data negadziriro yeparutivi & Mudzosere anokubvumira zvokusarudza negadziriro yeparutivi nokudzosa chero uchida kubva iOS mano / negadziriro yeparutivi.
dr.fone Toolkit - iOS Data negadziriro yeparutivi & Mudzosere anokubvumira kuita negadziriro yeparutivi yose zvinenge zvose mashoko pamusoro iPhone wako uye iPad, kana unogona zvokusarudza Export humboo kuti unoda kuramba kombiyuta yako. Kana pane kudiwa, nemiwo unogona nokudzosazve kutsigirwa mashoko kuti mudziyo yako kusarudza zvinhu zvaunoda. Ichava vakasarudzwa nani pane kushandisa iTunes kana iCloud.
Negadziriro yeparutivi iPhone Your / iPad pamwe One Click
Zvose negadziriro yeparutivi chinhu chete anotora iwe chete watinya. Kamwe mudziyo wako kwakabatana uye kuona, Chirongwa vachangoerekana negadziriro yeparutivi mashoko pamusoro wako iPhone, iPad kana iPod touch. The itsva negadziriro yeparutivi faira haangatenderi overwrite yekare. Unogona kuita negadziriro yeparutivi pose uchida.
Kutsigira mhando dzose mafaira
Dzidza zvakawanda >>
iPhone negadziriro yeparutivi uye Dzosa Havasisina Easy
Negadziriro yeparutivi nokudzosa iPhone mashoko chete watinya pashure unobatanidza mudziyo wako.
iPhone negadziriro yeparutivi Files haangavi Kutsva
Unogona kuita iPhone kuti negadziriro yeparutivi nezuva uye vose negadziriro yeparutivi mafaira vanoponeswa uye ichabvisa vatsva.
Preview iPhone negadziriro yeparutivi Content
Unogona kutoziva mashoko ose wako iPhone negadziriro yeparutivi mafaira iyi iOS negadziriro yeparutivi nokudzosa chirongwa, kuitira kuti iwe unogona kushandisa kwako iPhone negadziriro yeparutivi zvakanaka.
iPhone Dzosai Ko Overwrite Data Your
Mushure ratidzo, unogona kusarudza chero chinhu munguva iPhone wako negadziriro yeparutivi kuti kuidzosera iPhone wako kana iPad. harizovi kutsiva chero mashoko huripo pamusoro mudziyo wako.
Kana uchida kuverenga kana kudhinda mashoko ako, nemiwo unogona Export zvinhu yako iPhone negadziriro yeparutivi ive HTML faira kana vamwe kuti zvaunoda. Zviri kwauri.
Hazvinei chauri kushandisa ichangoburwa iPhone 7 Plus, iPad Pro, kana yakare iPhone 4, iPad 1, ichi iOS mashoko kupora inowirirana zvakazara mienzaniso yose iPhone, iPad uye iPod touch.
Izvi iOS negadziriro yeparutivi nokudzosa chirongwa kuverengwa-chete zvachose software. harizovi kuchengeta, kuchinja kana achigarira maoko chero mashoko ari mudziyo wako kana ari ndipo pachinobatsirawo faira. Tinotora zvako pachako mashoko uye nhoroondo zvakakomba. nguva dzose uri munhu chete anogona kuwana nayo.
Export Data kubva negadziriro yeparutivi Files
Sezvo kune negadziriro yeparutivi mafaira, unogona kusarudza kuti varambe zvose kana zvinomuomera kuikanganwa chimwe chazvo kuti murege kuva chikonzero. Uyezve, unogona kutoziva uye Export chero zvinhu kubva negadziriro yeparutivi faira pakombiyuta yako, uye anovaponesa sezvo HTML, CSV kana vCard mafaira.
Negadziriro yeparutivi uye kudzorera mashoko pamusoro iOS ako mano nyore.
iOS Data negadziriro yeparutivi & Mudzosere Works nokuda All iOS mano
Export faira zvinogona
Export contactsGoogle uye mashoko kuti kombiyuta sezvo .csv, Bhaibheri Dzvene, kana vcard;
Export WhatsApp mashoko kombiyuta sezvo .csv kana Dzvene;
Export runhare nerogi, anoti, karenda, zviyeuchidzo uye Safari zvaJehovha bogmærke kuti kombiyuta sezvo Dzvene.
3 Nzira em backup Notes musi iPhone uye iPad
Ko iTunes negadziriro yeparutivi?
Sei Dzosai WhatsApp negadziriro yeparutivi musi iPhone uye Android namano
Two Nzira negadziriro yeparutivi iCloud Contacts
Sei Data pamusoro Rakakiiwa iPhone 7 (Plus) / SE / 6s (Plus) / 6 negadziriro yeparutivi
Sei Dzoserai kuna iTunes negadziriro yeparutivi
iPhone negadziriro yeparutivi inofashaira: kusvina uye achapora iPhone Data
4 Nzira kune negadziriro yeparutivi iPhone Contacts pamwe / pasina iTunes
Mawanirwe iPhone negadziriro yeparutivi Location uye Kudzima Backups
Kupora vakarasika kana dzadzimwa vaaizivana, mashoko, mapikicha, anoti, etc. kubva iPhone, iPad uye iPod touch.